Safal Khabar - तपाई टाउको दुखेरे हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
बिहिबार, २६ असार २०७६, २० : २३
एजेन्सी । हाम्रो व्यस्थ दैनिकी, अनेक तनाब, दिनभरको काम र थकानले हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा पर्दछन् । ती मध्य धेरैलाई सताउने समस्या भनेको टाउको दुखाई पनि हो । हामी मध्य धेरैलाई टाउको दुखने समस्याले बारम्बार सताइरहेको हुन्छ ।